October 2012 – Sunuwar.org
साहसिक व्यक्तित्व सानुबाबु सुनुवार
–भावना परिष्कृत सुनुवार
यो जगत् र हामी मानिसको जीवन हाम्रो विचारको विस्तार हो । हामी जे सोच्छौँ त्यहीअनुरूप हाम्रो व्यक्तित्व बन्छ । हामी जुन दृष्टिभावले संसारलाई नियाल्छौँ त्यही दृष्टि र विचार मुताबिक नै संसारको रूप देख्दछौँ । सकारात्मक भाव र सोचले अनि सिर्जनशील अभ्यासले मानिसलाई जीवनमा सधैँ सफल र असल बन्ने अवसर मिलेर आउँछ जसले खुशी र सुखी हुन सघाउँछ । तर नकारात्मक भाव र सोचले पूरै जीवन असफलताको भुमरीमा फस्न पुग्दछ, साथै निरास र दुःखबाहेक हामीले केही पाउन सक्दैनौँ । तर फेरि असल सोच र सकारात्मक भाव राख्दैमा मात्र पनि लक्ष्य प्राप्ति भने सजिलै हात पर्दैन । यसको निम्ति त कडा अभ्यास र निरन्तर साधना चाहिन्छ । स्वयम् आफैमाथि पनि विश्वास गर्न सक्नुपर्छ, तबमात्र जस्तोसुकै महान लक्ष्यको मार्ग पनि सहज र सरल बन्दै जान्छ र अन्तमा व्यक्तिले आफ्नो सपनालाई शिखरमा विजयको झण्डा फहराएरै छाड्छ । यसरी आफ्नो महान लक्ष्यलाई साकार रूप दिँदै विश्वकै अग्लो हिमाल सगरमाथाको चुचोरोमा पुगी त्यसभन्दा ३० मिटरमाथि प्याराग्लाइडिङ गरी पुग्न सफल भए सानुबाबु सुनुवार । यसरी प्याराग्लाइडिङ गरी शिखरबाट सतहमा झर्ने उनी नै नेपालमा पहिलो व्यक्ति हुन् । Read More
Posted by: admin | on October 9, 2012
सुनुवार डट ओआरजि तथा दुरदा डट कमका संस्थापक वृहस्पति सुनुवारका आदरणीय ससूरा ओखलढुङ्गा जिल्ला, रगनी गा.वि.स. वडा नं. ५, केर–वाका जनकबहादुर सुनुवारको यही आश्मिन २० गते असामायिक निधन भएको हुँदा सम्पूर्ण परिवारमा पर्न गएको दुःख पिडा प्रति समावेदना प्रकट गर्दै दिवांगत आत्मको चिरशान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछौं ।
जन्म : २००५।
मृत्यु : २०६९।०६।२०
सुरज सुनुवार, सुनुवार डट.ओआरजि,
रणवीर सुनुवार क्युइँतबु कल्याण कोष,
समीर मुखिया, चुप्लु समाज,
कोइँचबु काःतिच, दुरदा डट कम
Posted by: admin | on October 5, 2012
सहयोगको लागि हार्दिक अपील
भनिन्छ, मृत्यु शास्वत सत्य हो । हामीलाई पनि लाग्थ्यो मृत्यु त्रूmर भए पनि पीडक भने होइन । हजुर, लाउँ–लाउँ, खाउँ–खाउँ भन्ने उमेरमा अनावश्यक पीडा दिएर जबर्जस्ती मृत्यु संघारमा धकेल्न खोज्नु अवश्य पनि न्यायसंगत होइन । हो, यस्तै परिस्थितिको सिर्जना भएको छ रामेछाप जिल्ला प्रिती गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ का बिलबहादुर सुनुवारको नाति लालबहादुर सुनुवारको छोरा वर्ष ३७ को गुणदास सुनुवारलाई । दुवै मिर्गौला पूर्णरूपमा क्षति भएका सुनुवारका विगत एक वर्षदेखि राष्ट्रिय मिर्गौला उपाचार केन्द्र वनस्थली काठमाडौंमा हप्ताको दुई दिन प्रति दिन
रु. ५,०००।– शुल्क तिरेर डाइलसिस गराइरहेका छन् । लामो समय महँगो उपचार गर्नु परेकोले थप उपचार तथा मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि आर्थिक अभाव भएको हुँदा आर्थिक सहयोग गरिदिन सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गरिन्छ । इच्छुक शुभचिन्तकहरूले गुणदास सुनुवारको नाममा रहेको एनसिसि बैंक चाबहिलको खाता नं. ०६८३३१S मा सिधै सहयोग रकम जम्मा गर्न सक्नुहुने छ ।
चुप्लु समाज, सुनुवार डट ओआरजि, सुनुवार सेवा समाज, गुणदास सुनुवार सहयोग समिति । Click here for more detail
सुनुवार सेवा समाज काठमाडौं जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न
सुनुवार डट ओआरजि समाचारदाता । १३ असोज । सुनुवार सेवा समाज काठमाडौं जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सो सम्मेलनले गोपालबहादुर सुनुवार अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय जिल्ला कार्यकारिणी समितिको समेत निर्वाचन गरेको छ । सो समितिमा उपाध्यक्षमा मानबहादुर सुनुवार, सचिवमा उत्तमकुमार सुनुवार, सह-सचिव आषिश वाइ.सि. सुनुवार, कोषाध्यक्ष शोभा सुनुवार, सदस्यहरु प्रेम सुनुवार, यमराज सुनुवार, राज कुमार रापाचा, शोभा सुनुवार, पदम कुमारी सुनुवार, महेश सुनुवार, लक्ष्मी सुनुवार रहेकाछन् ।